Ampidino Skype ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (74.50 MB)
Inona no atao hoe Skype, aloa ve izany?
Skype dia iray aminireo fampiharana aminny chat sy fandefasan-kafatra maimaim-poana be mpampiasa eranizao tontolo izao ataonny mpampiasa solosaina sy smartphone. Miaraka aminny rindrambaiko ahafahanao mandefa hafatra, miresaka ary miresaka video maimaim-poana aminny alàlanny Internet, dia manana fotoana hiantsoana finday sy finday aminny vidiny mirary ianao raha irinao.
Fihaonana aminireo mpampiasa aminny solo-sainizy ireo, finday avo lenta ary takelaka noho ny fanohananany sehatra maro, Skype dia mampiasa teknolojia P2P hahafahanireo mpampiasa mifampiresaka. Ny programa, izay manana fiasa mandroso toy ny kalitaonny feo sy horonantsary avo lenta (mety miovaova arakaraka ny hafainganam-pandehanny Internet), ny tantaranny resaka, ny antso aminny kaonferansa, ny famindrana rakitra azo antoka, manolotra karazana fitaovana mety ilainny mpampiasa azy. Na eo aza ny fanakianana azy noho ny fampiasana finday avo lenta sy ny fahalemenny fiarovana, Skype dia tsy isalasalana fa iray aminireo fampiharana fandefasan-kafatra hafatra sy horonantsary mahomby indrindra eny an-tsena izao.
Ahoana ny fomba fidirana / fidirana Skype?
Aorianny fisintomana sy fametrahana ny Skype aminny solosainao, raha tsy manana kaonty mpampiasa ianao rehefa mihazakazaka voalohany ny programa dia tsy maintsy mamorona kaonty mpampiasa anao aloha ianao. Mazava ho azy, raha manana kaonty Microsoft ianao aminizao fotoana izao dia manana fotoana hidirana aminny Skype miaraka aminny kaontinao Microsoft ianao. Aorianny fanatanterahana ireo fomba fiasa ilaina dia hanana fotoana hifandraisana maimaim-poana aminireo mpampiasa Skype erakizao tontolo izao ianao.
Raha efa manana kaonty Skype na Microsoft ianao dia araho ireto dingana ireto mba hidiranao aminny Skype:
Sokafy Skype ary kitiho ny anarana Skype, ny adiresy mailaka na ny nomeraon-telefaona.
Ampidiro ny anaranao Skype, ny adiresy mailaka na ny nomeraon-telefaonanao ary avy eo safidio ny Midira.
Ampidiro ny teny miafinao ary safidio ny zana-tsipika hanohy. Hisokatra ny session Skype-nao. Rehefa avy niditra ianao dia tadidini Skype ny fampahalalana nataonao rehefa manakatona Skype ianao na misafidy ny hivoaka ary mahatadidy ny fikirana kaontinao.
Raha tsy manana kaonty Skype na Microsoft ianao dia araho ireto dingana ireto mba hidiranao aminny Skype:
Mandehana any aminny Skype.com aminny tranokalanao na sintomy Skype aminny fipihana ny bokotra Skype etsy ambony.
Atombohy ny Skype ary kitiho ny Mamorona kaonty vaovao.
Araho ny lalana aseho aminny famoronana kaonty vaovao ho anny Skype.
Ahoana ny fampiasana Skype
Miaraka aminny fanampianny Skype, izay ahafahanao manao ny asa rehetra toy ny antso an-tariby, antso aminny kaonferansa iraisana miaraka aminny namanao, chat video tsara kalitao, famindrana rakitra azo antoka, azonao atao ny mifandray aminireo namanao sy fianakavianao aminny fanesorana ny halavirana.
Azonao atao ihany koa ny manomana ny lisitry ny namanao manokana, mamorona vondrona ho anny fandefasan-kafatra betsaka aminny namanao, mampiasa ny fizarana fizarana efijery hanehoana na hanampiana olona samy hafa aminny solosainanao, hijerena ireo fifanarahana teo alohanay noho ny fisehonny hafatra / tantaranny resadresaka, anaovy fanovana eo hafatra nalefanao na mampiasa fomba fiteny isan-karazany. Azonao atao ny mandefa ny tianao aminny namanao mandritra ny fandefasanao hafatra.
Ny interface interface Skype dia tena intuitive ary mora ampiasaina. Aminizany fomba izany, ny mpampiasa solosaina sy ny finday aminny ambaratonga rehetra dia afaka mampiasa Skype mora foana tsy misy fahasahiranana. Ny fiasa toy ny mombamomba ny mpampiasa, ny fampandrenesana momba ny satanny, ny lisitry ny fifandraisana / ny namana, ny resadresaka farany natao taminny fandaharana fandefasan-kafatra mahazatra rehetra dia hita eo aminny ilany ankavananny interface ny mpampiasa. Mandritra izany fotoana izany, ny folder Skype, ny settinganny vondrona, ny boaty fikarohana ary ny bokotra fikarohana karamaina dia aseho ihany koa aminireo mpampiasa eo am-baravarankely lehibe aminilay programa. Eo aminny ilany ankavananny interface interface aminny programa dia aseho ny atiny nofidinao sy ny fikandrana am-baravarankely nataonao taminireo olona nofidinao taminny lisitry ny fifandraisana.
Raha manana fifandraisana Internet haingana ianao dia afaka milaza aho fa tsy hahita ny kalitaonny feo sy ny antso an-tsary aminny Skype aminny programa fandefasan-kafatra hafa ianao. Na dia manome anao kalitao tsara sy sary tsara lavitra noho ny serivisy VoIP aza izy ity, raha manana fifandraisana Internet miadana ianao dia mety hiatrika fanodikodinam-peo sy fanemorana ilay feo.
Ankoatrizay, na dia manana fifandraisana Internet ratsy aza ianao, dia azonao atao ny manararaotra ny fampitana hafatra aminny Skype tsy misy olana. Ny bokotra kalitaonny antso aminny programa dia hanome anao fampahalalana aminny antsipiriany momba ny antso an-tsary na ny resadresaka am-peo ataonao aminizao fotoana izao.
Sintomy ary apetraho Skype
Raha mitady programa fandefasana hafatra, antso an-tsary ary antso an-tsary mahomby sy mora ampiasaina ianao dia afaka miteny aho fa tsy hahita tsara kokoa noho ny Skype eny an-tsena ianao. Raha heverintsika fa ny Skype, izay novidianny Microsoft taminny taona 2011, dia novolavolaina taminny sehatra rehetra ary nanolo ny fampiharana fandefasan-kafatra malaza anny Microsoft Windows Live Messenger, na MSN araka ny fantatra aminireo mpampiasa Tiorka, dia ho tsapanao indray fa marina ny ahy momba izay Hoy aho.
Fiantsoana horonam-peo sy horonan-tsary HD: Andramo ny horonam-peo mazava an-tsary sy horonan-tsary HD ho anny antso an-tariby na aminny vondrona misy valiny antso.
Fandefasan-kafatra marani-tsaina: Valio avy hatrany ireo hafatra rehetra miaraka aminny fihetsika mahafinaritra na ampiasao ny famantarana @ (manonona) hisarihana ny sainny olona iray.
Fizarana efijery: Mizara fampisehoana, sary na zavatra hafa mora foana aminny efijeryo aminny fizarana efijery ao anatiny.
Antsoy ny fandraisam-peo sy ny lohateny mivantana: Raketo antso Skype mba hisamborana fotoana manokana, soraty ireo fanapahan-kevitra manan-danja, ary ampiasao ny fanazavana mivantana hamakiana izay voalaza.
Miantso telefaona: Miresaha aminny namana izay ivelanny Internet aminny alàlanny fiantsoana finday sy ny laharana finday miaraka aminny tahanny fiantsoana iraisampirenena lafo vidy. Manaova antso aminny laharana finday sy telefaona finday erakizao tontolo izao aminny taha ambany indrindra aminny alàlanny carte de crédit Skype.
Resadresaka tsy miankina: Notehirizinny Skype tamim-pitandremana ireo resaka saro-pady anao taminny alàlanny enkripsi end-to-end fenonny indostria.
Fihaonana an-tserasera iray-tsindry: mandrindra fivoriana, dinidinika aminny tsindry iray raha tsy misintona ny fampiharana Skype ary miditra.
Mandefasa SMS: Mandefasa hafatra mivantana avy aminny Skype. Jereo ny fomba haingana sy tsotra hifandraisana aminny alàlanny SMS an-tserasera na aiza na aiza, aminny fotoana rehetra aminny Skype.
Mizarà toerana: Mifankahita aminny daty voalohany na lazao aminny namanao ny toerana fialamboly.
Vokatry ny sary: ​​Rehefa navelanao io fampiasa io dia manjary manjavozavo ny fiavianao. Azonao atao ny manolo ny mombamomba anao aminny sary raha tianao.
Mandefa rakitra: Afaka mizara sary, horonan-tsary ary rakitra mora foana hatraminny 300MB ny habeny aminny alàlanny fisintomana sy fametrahana azy ireo ao am-baravarankely fifampiresahana.
Mpandika Skype: Mandray soa avy aminny fandikan-teny aminny ora tena izy, antso an-tsary ary hafatra eo noho eo.
Mandrosoa antso: Mandrosoa ny antso Skype anao aminny telefaona rehetra hifandraisanao rehefa tsy tafiditra aminny Skype ianao na tsy afaka mamaly antso.
ID mpiantso: Raha miantso finday na laharana aminny Skype ianao dia hiseho ny nomeraonao na ny laharan-tarehinao Skype. (Mila fanitsiana.)
Skype To Go: Miantso laharana iraisam-pirenena avy aminny telefaona rehetra aminny sarany takatry aminny Skype To Go.
Telefaona, birao, tablety, tranonkala, Alexa, Xbox, Skype iray ho anny fitaovanao rehetra! Mametraha Skype izao mba hifandraisanao aminireo olon-tianao erakizao tontolo izao!
Ahoana ny fanavaozana ny Skype?
Zava-dehibe ny fanavaozana ny Skype mba hahafahanao miaina ireo fiasa farany. Skype dia manatsara hatrany ny fanatsarana ny kalitao, ny fanatsarana ny fahamendrehana ary ny fanatsarana ny filaminana. Ary koa, rehefa atsahatra ny kinova taloha anny Skype, raha manohy mampiasa ny iray aminireo kinova taloha ireo ianao dia mety hivoaka avy hatrany aminny Skype ary mety tsy afaka miditra indray mandra-pivoakanao aminny kinova farany. Rehefa manavao ny fampiharana Skype ianao dia afaka miditra aminny tantaram-pifanakalozanao hatraminny herintaona lasa izay. Mety tsy afaka miditra aminny tantaram-bolanao taminny daty taloha ianao taorianny fanavaozana. Ny kinova farany Skype dia maimaim-poana misintona sy mametraka!
Tsindrio ny bokotra fampidinana Skype etsy ambony raha te haka ny tsimbadika farany anny Skype ary hiditra. Raha mampiasa Skype ho anny Windows 10 ianao dia azonao atao ny manamarina ny fanavaozana avy aminny Microsoft Store. Mba hanavaozana ny fampiharana Skype aminny Windows 7 sy 8 dia araho ireto dingana ireto:
Midira aminny Skype.
Safidio Hamarino raha havaozina. Raha tsy hitanao ny menio fanampiana ao aminny Skype, kitiho ny ALT mba hampisehoana ny baraovana.
Endri-kaonferansa video kalitao HD
Fahafahana miresaka aminizao tontolo izao aminny mora
Fizarana fizarana lamba
Haben'ny rakitra: 74.50 MB